कहिले बन्ला अरुण तेस्रो ? | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार कहिले बन्ला अरुण तेस्रो ?
पाठक विचार7views
कहिले बन्ला अरुण तेस्रो ?
चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएसँगै सुदूरपश्चिमको विकासको ढोका खुलेको विषयले निकै चर्चा पायो । सुदूरपश्चिमको पहिलो ठूलो जलविद्युत् आयोजना ढिलै भए पनि निर्माण सम्पन्न हुनु त्यहाँका जनताका लागि ठूलै प्राप्ति हो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै अरू विकास निर्माणका आधार तयार भएको हुँदा चमेलियाको प्रशंसा गर्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, योभन्दा निकै पहिला तयार भइसक्नुपर्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना अझै किन अनिश्चित छ ? यस विषयमा सरकार तथा सम्बद्ध निकायले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको पाइँदैन ।
करीब २५ वर्षदेखि चर्चामा रहेको अरुण तेस्रो त्यतिबेला बन्न नसक्नुमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोध नै हो भन्नमा सङ्कोच मान्नु पर्दैन । पटकपटक निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्दै र रद्द गर्दै आउनुमा अरू राजनीतिक दलक नेतृत्ववर्गको पनि स्वार्थ रहेको अप्रत्यक्ष रूपमा पुष्टि भइसकेको छ । अहिले नै पनि अदालतमा परेको मुद्दामा सतलजलाई नदिने फैसला भएको समाचार छ । यसले यो आयोजनाको भविष्य अझै अन्योलमा पर्ने देखिन्छ ।
अहिले चमेलिया सुदूरपश्चिमको विकासको ढोका भयो । अरुण तेस्रो आजभन्दा धेरै पहिला पूर्वको विकासको ढोका हुन सक्थ्यो । त्यो ढोका खोल्दा कुनै राजनीतिक दला वा व्यक्ति विशेषले फाइदा खोजे पनि होलान् । तर, उनीहरूले जति नै फाइदा लिएका भए पनि अहिलेसम्ममा राज्यले पनि फाइदा पाइसक्थ्यो । विद्युत् आयात गर्नुको साटो निर्यात गर्न सकिने थियो ।
अब पनि विभिन्न बहाना बनाएर यो आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्नुभनेको पूर्वी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनताका लागि बेफाइदाको कुरा हो भने समग्र देशलाई पनि बेफाइदा नै हुन्छ । तसर्थ जतिसक्दो चाँडो निर्णय गरेर सरकारले अरुण तेस्रो निर्माणको वातावरण तयार पारोस् ।
सत्ता, भत्ता र राजनीतिक चलखेल
४ चैत्र २०७४, आईतवार ०५:३०
ठूला व्यक्तिकै सोच संस्कार सानो किन ?
१७ फाल्गुन २०७४, बिहीबार ०६:०५
नेपालका राजमार्ग र सवारी दुर्घटना
६ फाल्गुन २०७४, आईतवार ०६:३१
मेलम्ची आयोजनाको जिम्मेवारी के ?
३ फाल्गुन २०७४, बिहीबार ०६:३६